Iqonga le-CAD / GIS kufuneka liye kwi-GPU-Geofumadas
Ikhaya/ezintsha/namaqonga CAD / GIS kufuneka aye GPU
Abo kuthi abasebenzisi begraphical izicelo bahlala belindele ukuba iikhompyuter zinememori yokusebenza eyaneleyo. Kule nto, iinkqubo ze-CAD / GIS zihlala zibuzwa okanye zilinganiswa ngokusekwe kwixesha elithathwayo ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla enje:
Ukulungiswa kunye nokubhaliswa kwemifanekiso
Ukuthunyelwa kwedatha enkulu
Ulawulo lweenkcukacha ngaphakathi kwe-geodatabase
I-PC yendabuko ayitshintshanga kakhulu kwiminyaka yamuva, ngokwe-RAM, idiski enzima, imemori yemifanekiso kunye nempawu eziye zanda; kodwa ingqiqo yokusebenza ye-CPU igcine isakhiwo sayo sokuqala (Yingakho siqhubeka simbiza ngeCPU). Kukwayinto engeloncedo ukuba njengoko amaqela ekhula ngokusebenza, iinkqubo zibulala ulindelo lwabo ngokuzenzela ukuba basebenzise amandla amatsha.
Ngokomzekelo, (kunye nomzekelo kuphela) Xa abasebenzisi ezimbini zibekwe ngelo xesha phantsi kweemeko ezifanayo izixhobo kunye data, omnye AutoCAD 2010 enye kunye Microstation V8i, kulayishwa 14 eyi imifanekiso, ifayile parcelario iipropati 8,000 kunye uqhagamshelo kwiziko ledatha lwendawo Oracle, sizibuza yona umbuzo:
Yintoni enye yezo zibini, ukuze ungagqithisi umshini?
Impendulo ayikho kwizinto ezintsha, yindlela nje inkqubo ephuhliswa ngayo, kuba oku akunjalo nge-AutoDesk Maya, eyenza izinto ze-crazier kwaye yenza ngcono. Indlela yokuxhaphaza i-PC iyafana (ukuza kuthi ga ngoku kwimeko yeenkqubo ezimbini), kwaye ngokusekwe koku sidubula iinkqubo, kuba sizisebenzisa ukusebenza, kwaye kakhulu. Ke, ezinye iikhompyuter zaziwa njengee-PC zesiko, iindawo zokusebenzela okanye iiseva; hayi ngenxa yokuba zinolunye umbala, kodwa ngenxa yendlela eziqhuba ngayo ekusebenziseni iinkqubo eziphezulu kuyilo lwegraphic, ukuqhubekeka kwevidiyo, ukuphuculwa kwesicelo, imisebenzi yeserver, kwaye kwimeko yethu, ukusebenza kwedatha yendawo.
I-CPU encinane, i-GPU eninzi
Eyona ebalaseleyo neenguqu kutshanje eziye zenzeke sesakhiwo iiPC ligama yavela GPU (Process Unit Graphics), ukufumana imisebenzi engcono ikhompyutha, ngokwenza imisebenzi kakhulu kwimisebenzi ezincinane ngaxeshanye, ngokudlulisela ulawulo ye-CPU (iCentral Process Unit), amandla akhe okudlala adlala phakathi kweenguqulelo ze disk, imemori ye-RAM, imemori yevidiyo kunye nezinye iinkcukacha (a baninzi abanye).
Amakhadi emizobo awenzelwanga ukunyusa inkumbulo yevidiyo, kodwa endaweni yoko ibandakanya iprosesa enamakhulu eecores ezenzelwe ukuqhuba iinkqubo ezifanayo. Oko bebesoloko benako (ngaphezulu okanye ngaphantsi), Kodwa uncedo olukhoyo ngoku kukuba aba bavelisi banikezela uyilo oluvulekileyo (phantse) ukwenzela ukuba abaphuhlisi besoftware baqwalasele ubukho bekhadi lwezi zinto kwaye basebenzise amandla alo. I-PC Magazine kulo Januwari ikhankanya iinkampani ezinjenge-nVidia, i-ATI kunye nezinye ezibandakanyiweyo kumanyano VulaCL
Ukuqonda umahluko phakathi kwe-CPU kunye ne-GPU, nantsi ndibhekisela kumzekeliso:
CPU, yonke indawoKufana nomasipala onayo yonke into esembindini, enesicwangciso sasedolophini, uyazi ukuba kufuneka alawule ukukhula kwakhe kodwa akakwazi ukubeka iliso nakwizakhiwo ezitsha ezophula imigaqo. Kodwa endaweni yokunika le nkampani kwiinkampani zabucala, uyanyanzelisa ekuthatheni le ndima, abemi abayazi ukuba bakhalaze kubani ngommelwane ohamba ecaleni kwendlela, kwaye isixeko siyaqhubeka nokuphazamiseka yonke imihla.
Uxolo, akazange akhulume ngodolophu wakho, uthetha nje ngomzekeliso we-CPU, apho le nxalenye yeCandelo leNkcazo (kwimeko yeWindows) kufuneka yenze iqela lenze kwiinkqubo ezifana nale:
Iinkqubo ezisebenza xa kuqala iWindows, ezinje ngeSkype, i-Yahoo Messenger, iAntivirus, iJava Injini, njl. Konke ukutya inxalenye yokusebenza kwememori yokusebenza ngokubaluleka okuphantsi kodwa ngokungeyomfuneko ngaphandle kokuba kuguqulwe yi-msconfig (abanye abayihoyi).
Iinkonzo ezisebenzayo, eziyinxalenye yeWindows, iinkqubo zokusetyenziswa okuqhelekileyo, izixhobo zekhompyutha eziqhagamshelekileyo okanye ezinye ezingakhutshelwanga kodwa zihlala zisebenza. Ezi zihlala zinomgangatho ophakathi / ophambili.
Iinkqubo ezisetyenziswayo, ezisebenzisa indawo ngeyona nto iphambili. Siva isantya sokuphunyezwa kwesibindi sethu kuba siyaqalekisa ukuba abayenzi ngokukhawuleza nangona baneqela elisebenza kakuhle.
Kwaye nangona iWindows isebenza ngayo, iinkqubo ezinjengeenkqubo ezininzi ezivulekileyo, ukufaka okanye ukukhenxisa ngokungenakuphikelela, izihloko ezingadingekile ezibonakalayo iipintones, basenza sinetyala lokungasebenzi kwempahla.
Kwenzeka ke ngoko, ukuba xa siqala inkqubo yezo zikhankanywe ekuqaleni, umprosesa uya kuba ukuphazamisa ikhokoni ukufuna ukubeka phambili oku ngaphezulu kwezinye iinkqubo ezisetyenziswayo. Izinketho zakho ezimbalwa zokusebenzisa kakuhle yimemori ye-RAM, imemori yevidiyo (ehlala yabelwana ngayo), ukuba kukho ikhadi lemizobo, fumana into kuyo, kuxhomekeke kuhlobo lwehard drive kunye nezinye izinto ezingathandekiyo.
GPU, iinkqubo ezifanayo, Kuyafana nomasipala ogqiba ekubeni abele abemi abaphantsi amagunya, ukuvumela okanye ukwenza izinto zabucala kwizinto ezingafikelelekiyo ukuba, nangona ziyinkqubo enkulu, zenziwa kwimisebenzi emincinci. Ke, ngokusekwe kwimigaqo yangoku, inkampani yabucala inikwa indima yokujonga ukwaphula isohlwayo ngendlela ethile. Nje ngeziphumo (mzekelo nje), ummi unokuzalisekisa loo mihlali enomdla wokuxelela iimbambo kummelwane othabatha inja shit ecaleni kwendlela yakhe, owakha udonga ngokuthatha inxaxheba ecaleni kwendlela, opaka imoto yakhe ngendlela engafanelekanga, njl. Inkampani iyaphendula umnxeba, iye kuloo ndawo, ilandele isenzo, iyise enkundleni, iphumeze isohlwayo, isiqingatha siye kumasipala, enye lishishini elinenzuzo.
Yile ndlela i-GPU isebenza ngayo, iiprogram zingenziwa zenzelwe ukuba zingabathumeli iinkqubo ezinkulu ngendlela eqhelekileyo, kodwa kunoko zihamba ngokufana neendlela ezincinci ezicwangcisiweyo. O! mhle!
Ukuza kuthi ga ngoku, azizininzi iinkqubo ezenza usetyenziso lwazo ngezi zinto. Uninzi lwabo, banqwenela ukufikelela kuma-bits angama-64 ukusombulula iingxaki zabo, nangona sonke siyazi ukuba uDon Bill Gates uhlala ehamba kwezo zinto ngokulayisha izinto ezingeyomfuneko kwiinguqulelo ezilandelayo zeWindows. Isicwangciso seWindows sibandakanya ukusebenzisa i-GPU ngokusebenzisa ii-API eziyilelwe ukusebenza kwi-DirectX 11, eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe yenye indlela eya kwamkelwa ngumntu wonke (okanye uninzi) kuba baya kuyikhetha njengomgangatho endaweni yokwenza izinto eziphambeneyo kuphawu ngalunye ngaphandle kwe-OpenCL.
Igrafu ibonisa umzekelo, obonisa indlela phakathi kuka-2003 no-2008 iprosesa ye-nVidia nge-GPU eguqula ubuchule bayo ngokuthelekiswa ne-Intel CPU. Kwakhona ukutshaya umahluko.
Kodwa ukubakho kwe-GPU kulapho, ngethemba kwaye iinkqubo zeCAD / GIS zifumana ijusi eyimfuneko. Sele iviwe, nangona elona tyala libalaseleyo lelika-d
e I-GIS ephindaphindeneyo, enamakhadi e-CUDA, avela kwi-nVidia, apho inkqubo yokuveliswa kwemodeli yedijithali yendlela ethathe ngaphezulu kwemizuzu engama-6 yenziwa kwimizuzwana eyi-11, isebenzisa ithuba lobukho bekhadi le-CUDA. Ukutshaya into ebenzileyo ukuphumelela kwiGeotech 2008.
Ekugqibeleni: Siya ku-GPU, siya kubona ngokubanzi kwiminyaka emibini ezayo.
Ukuba bekungokubala ...
Sawubona Vicente, ndiyabona ukuba ubonakala usebenzisa i-Windows 7.
Ingaba kukho nto ulahlekileyo ngeXP?
Ngaba zikho izizathu zokuba ndingayi kubuyela kwi-XP?
Windows 7 kwi-64bit isakuvumela ukuba ufake usetyenziso kwi-32bit ... Kwaye ukuza kuthi ga ngoku akukho nasinye kwizicelo zam ze-GIS esele ziyekile ukusebenza.
"Ngendlela, ngaba ukhe wazama i-Manifold kwi-64-bit?"
Nup…. Nangona i-PC yam ethobekileyo ine-64-bit AMD, bendingafuni ukufaka iWindows 64 njengestaki sezicelo kwaye abaqhubi ngekhe basebenze. Ndicinga ukuba inyathelo liya kuba yi-PC ezinikeleyo kwaye ufake yonke into kwii-64bits.
Andiqinisekanga ukuba iManfold yayiya kuba yenye yezo zicelo eza kwenza umehluko wazo zilawulwe phantsi kwe-64 bits, kwaye bekungekho nje ukulungelelaniswa kodwa babeza kuthatha ijusi (njengokuba benza ngobuchwepheshe beCUDA GPU).
Enkosi ngencam uGerardo. Ngendlela, ukhe wazama ama-64 ombane aphindaphindiweyo?
Ukuba ufuna ukubona umboniso wevidiyo yeziNinzi apho unokubona isantya sokuqhubekeka kwamacwecwe ngetekhnoloji ye-CUDA-, ukongeza, uninzi lunokufakwa ngokudibeneyo kwaye longeze amandla abo, ukuba nje zikhona iindawo zokubeka- yiya kule URL yeYouTube :
Enye ibhontshisi yeembali zeMbali: I-1 Inkqubo ye-64 ye-SIG. Kwaye ngoku, i-1er SIG ekusebenziseni ubuchwepheshe beCUDA ..